Arts & Humanities » Capricorn 06	32
Mr. MarGa says: Happy Birthday ပါ
Kaung Kin Pyar says: တူရာသီလေ…..
chate chate says:့ ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ကောင်းကင်ပြာ
Kaung Kin Pyar says: တူရာသီတွေက ကျဥ်းထဲကျပ်ထဲ ရောက်နေချိန်တောင် Surviving ကို ရအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိတယ်….။
ဖားသက်ပြင်း says: မကာရ ​တွေကိုကျ​နော်​ အလွန်​မုန်းပါတယ်​ခီညာ
Kaung Kin Pyar says: မကာရထဲမှာ…ခင်ညား စိတ်အပုပ်ဆုံး….
ဖားသက်ပြင်း says: ကရင်​​တေမ​ကောင်းလို့ပါကွယ်​
La Yeik says: Happy Birthday ပါကောင်းကင်ပြာရေ….
Kaung Kin Pyar says: ကျေးဇူးပါ လရိပ်ရေ….
Yae Myae Tha Ninn says: ဟတ်ပီး ဘတ်ဒေးပါကွာ… စိတ်ပါတိုင်း ကိုယ်ပါနိုင်တဲ့ ဘ၀ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ… ဖြစ်သင့်တာထက် ပိုဖြစ်ထွန်းပါစေ… :D
Kaung Kin Pyar says: ကျေးဇူးပါ ကိုထွဋ်ရေ့….
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . ၂၀၁၅ ကစပြီး ကြိုးစားမယ့်အထဲမှာ မင်ဂါဆောင်မှာ မပါဘူးလား။
Kaung Kin Pyar says: မားသားက ၂၀ မှာ ဖားသားနဲ့ ရဲဇားဖြစ်ပြီး ၃၀မှာ ယူသဒဲ့…။
kyeemite says: .Happy Birthday ပါကောင်းကင်ပြာရေ….
.2015 နှစ်သစ်မှာ မျှော်မှန်းထား ရည်ရွယ်ထားသမျှတွေ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ကျေးဇူးပါ အူးကြီးမိုက်စ်ရေ…..
kai says: ဒီလိုခေတ်က… ကလေးဘယ်အချိန်မွေးရမယ်.. တွက်ချက်ယူလို့ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပြီး… တွက်ချက်လည်းယူနေကြပါတယ်..။
ကွိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးရတဲ့ ကြားထဲ အမွှာက လိုချင်ကြသေးတာလား သဂျီး…
kai says: ၀င်ငွေနည်းသူဆို..အစိုးရက..တယောက် ၈ရာလောက်ပေးတယ်လေ…
ကလေး ၄ယောက်လောက်ဆို.. မိဘလည်း.. အလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Maung Thura says: မနက်က ပြောပြီးပြီနော်..
Kaung Kin Pyar says: I know it. I know it. Thanks for your wishes Sett Sett!
တောင်ပေါ်သား says: ( ဖတ်မိသမျှ ရာသီခွင်တွေထဲမှာ၊ ကြုံခဲ့သမျှ..ရာသီဖွားတွေထဲမှာတော့ တူရာသီ(Libra)ကို သဘောအကျဆုံး။ သူရို့တော်တော်များများဟာ…လက်ရှိ ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာ…အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်အောင် win-win situation ကို ဖန်တီးနိုင်ကြတယ်.…။ )
အနော်က အောက်တိုဘာ ၂၁ တူရာသီဖွားဗျ ၊ ဒါပေမယ့် win-lost တွေ win-draw တွေလည်း ပေါမှပေါ ဘဝကြီးပါ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဒါတော့ ရာသီဖွားတိုင်း ရှိတတ်ပါတယ် ဒယ်ဒီ ပါပါး ဖားသား ချစ်ဖေဖေရယ်……
တောင်ပေါ်သား says: အွန် ဘီလိုသဘောနဲ့ ခေါ်သတုန်း
နာ့တားတားဂိုဒေါ့ ချမ်းသာပေးဘာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
မြစပဲရိုး says: ရီမိုင်ဒါ လုပ်ထားခဲ့ပါတယ် ကင်းကောင်လေးရေ။
Kaung Kin Pyar says: စိမ်းလိုက်ပါတယ် အရီးရယ်…
manawphyulay says: လူတိုင်း လူတိုင်း နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ လတစ်လတိုင်းမှာ ပါဝင်နေကြတာပဲ…
ဒါနဲ့ ခုလည်း အဲဒီမှာ နေတာလားဟင်… မနော ငယ်ငယ်တုန်းက တိမွေးကုဝင်းထဲမှာ နေခဲ့ဖူးတယ်… ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်များ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်…
Kaung Kin Pyar says: မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ မနောလေးရေ..
pooch says: Happy birthday ပါ ည​လေး
Kaung Kin Pyar says: မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မပုခ်ျရေ…
padonmar says: ကင်းကောင်ပြာလေးရေ
Kaung Kin Pyar says: ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ အာတီဒုံရေ….
Crystalline says: ပျော်ရွင်ပါစေ..ကောင်းကင်ပြာရေ. ဟိုမောင်နှံကတော့ နွေခေါင်ခေါင်မှာမွေးမှာဆိုတော့ ဒီမှာသာဆို ပူတာမလွယ်.. :D